Iphrofayela Yenkampani - Xuzhou Zhuodin Glass Products Co., Ltd.
I-Xuzhou Zhuoding Glass Products Co., Ltd. iyibhizinisi lobuchwepheshe obuphezulu elinezinto ezintsha zengilazi njengomkhiqizo walo ohamba phambili, inhloko yayo iseXuzhou City, esifundazweni saseJiangsu, eChina, enabasebenzi abangaphezu kuka-200. Sinelungelo lokungenisa nokuthekelisa ngaphandle. Eminye yemikhiqizo yethu ithunyelwa eJapan, USA, Russia, Canada, South Korea, Germany, France, UK, Australia nakwamanye amazwe.
Manje inkampani inochungechunge lwemikhiqizo emithathu: ingilazi yokupakisha, ingilazi engashisi kanye nengilazi esetshenziswa nsuku zonke, futhi ikhwalithi yemikhiqizo yethu isifinyelele ezingeni eliphezulu lamazwe ngamazwe.
Ifektri yethu ikhiqiza izinhlobo ezingaphezu kuka-3000 zamabhodlela engilazi, okuhlanganisa: amabhodlela ewayini engilazi, amabhodlela engilazi yesiphuzo, amabhodlela engilazi yoju, amabhodlela engilazi yezinongo, amabhodlela engilazi amathini, amabhodlela emithi, amabhodlela ekhofi, izinkomishi zomlomo, amabhodlela obisi, izibambi zamakhandlela engilazi, isibambo. izinkomishi, izinkomishi zamanzi, oral liquid amabhodlela ingilazi, njll Singase futhi ukuhlinzeka glass amabhodlela sandblasting, lettering, ukubhaka porcelain, umbala sishaye, ukunyathelisa nokunye ukucubungula okujulile.
Imigqa Yokukhiqiza Okuzenzakalelayo Ngokugcwele
Imigqa Yokukhiqiza Manuwali
Okukhiphayo Kwansuku zonke
I-Xuzhou Zhuoding Glass Products Co., Ltd. iyibhizinisi lobuchwepheshe obuphezulu elinezinto ezintsha zengilazi njengomkhiqizo walo ohamba phambili, inhloko-dolobha yayo eXuzhou City, eSifundazweni saseJiangsu, eChina, okuyinkampani ebalulekile kwezomnotho, ezesayensi nezemfundo, amasiko, ezezimali, ezokwelapha kanye isikhungo sohwebo lwangaphandle empumalanga yeChina, kanye nedolobha elibalulekile elithi "Ibhande Elilodwa, Umgwaqo Owodwa" kanye nesikhungo sezokuthutha esiphelele. Futhi iyidolobha elimaphakathi ne-Huaihai Economic Zone.
Imboni yethu iphethe ngokukhethekile Olayini Bokukhiqiza Okuzenzakalelayo abayisi-8, Imigqa Yokukhiqiza eyi-Manuwali engu-19, enomphumela wansuku zonke wamabhodlela ezingilazi angu-350,000 ezinhlobo ezihlukahlukene. Kunabasebenzi abangaphezu kwama-200, okuhlanganisa onjiniyela abaphezulu abangaphezu kuka-30 nabahloli bekhwalithi abangaphezu kuka-20. Ikhwalithi yomkhiqizo ilawulwa ngokuqinile futhi ilawulwa emazingeni ahlukahlukene. , Imikhiqizo esezingeni eliphezulu izuze umusa kumakhasimende asekhaya nawakwamanye amazwe, futhi imikhiqizo ithunyelwa eJapan, e-United States, eRussia, eCanada, eSouth Korea, eJalimane, eFrance, e-United Kingdom, e-Australia nakwamanye amazwe.
Imboni yokubumba ngaphansi kwefekthri yethu ingaklama amabhodlela amasha futhi ivule isikhunta esisha ngekhwalithi efanelekayo ngesikhathi esifushane ngokuvumelana nezidingo zamakhasimende.
Amakhasimende Wokubambisana Womhlaba Wonke
Ngezindawo zethu zokukhiqiza ibhodlela lengilazi ezithuthukile emhlabeni wonke, kanye nezisebenzi ezinolwazi, imikhiqizo yethu ihlangabezana nezindinganiso zekhwalithi zamazwe ngamazwe.
Izinkampani ezingaphansi kwethu zifaka amafekthri esikhunta, izimboni zokupakisha, izimboni zamakepisi, njll., eziqinisekisa ukutholakala okuphelele kwazo zonke izinhlobo zezinsiza ngesikhathi.
Sinenzuzo yezindleko eziphansi kakhulu ze-ejensi yokuthunyelwa kwempahla kwamanye amazwe, ukuhlolwa kwempahla kanye nesimemezelo samasiko kanye namanye amabhizinisi ahlobene.
Sihlala sithatha ukwethembeka nokwethembeka, ikhwalithi kuqala njengenhloso yethu yebhizinisi, futhi sinikeza ikhwalithi nezinsizakalo eziphumelelayo kumakhasimende ethu. Ngekhwalithi yomkhiqizo enhle kakhulu kanye nenzuzo yamanani ashibhile, sibheke ngabomvu ukuba nguzakwethu wesikhathi eside wokuhwebelana.